Suldan Sanjo oo la suul daaray
Waa ciyaar ay u balan sanaayeen laba koox oo ay kala wateen Suldanka Sports G/J/Hoose Mudane Sanjo iyo Guddoomiyaha Qurba-Joogta Sports ka G/J/Hoose Eng. Cabdisamed Sh Qasim. Waxay ciyaartani ahayd mid lagu soo dhoweynayey Suldanimadda Sanjo laguna sii dhoweynayey Cabdisamed oo soo gutay shaqadiisii qaran ee labadda bil iyo barka ahayd.
Kooxda Sanjo ayaa waxaa laga xusi karaa Guddoomiyayaashii hore ee xiriirka kubadda cagta Mudane Big oo horay u ahaan jiray ciyaartooydii Warshadda Hilibka iyo xulka G/J/Hoose iyo sidoo kale Mudane Yahye Cartan. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa Mudane SLA, madaxa garsoorka G/J/Hoose iyo Jamaal oo ka mid ah Garsoorayaasha Kubadda Cagta iyo Shariif oo mar ka mid ahaa tababarayaasha kubadda cagta.
Waxaa kooxda Abdisamed ka mid ahaa Bishaar Kata, kooxdii warshadda Hilibka iyo Xulkii G/J/Hoose; Cabdirahman Sharif, Kooxdii Entte banane iyo Xulkii G/J/Hoose; Ganacsade Cali Naji; Adan Sanka, Guddoomiye kuxigeenka labaad ee xiriirka kubadda cagta G/J/Hoose; Carab, Tababaraha Kooxda Twin City ee magaaladda Miniyaabolis; Biibaye, Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmadda Kismayu; Xaji iyo Israel oo ah tababaraha kooxda horyaalka qaaday ee xaafadda farjanno.
Waxaa bilaabatay ciyaartii oo aad u xiiso badnayd dadwenuhuna ay sugayeen waxa ay odayaashu soo bandhigaan. Waa dhab in ay maskax badan halkaas isugu timid waxaana labadda kooxood ay heleen fursado badan oo goolal loo fishay. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaku soo gabagabowday 1-1, markii la isku soo noqdayna waxaa goolkii labaad dhashatay kooxdii Abdisamed. Suldaan Sanjo ayaa wuxuu soo xasuustay in Kata uu ahaa ciyaartooy ka mid ah kuwii uu soo layliyey isla markaasna uusan xafinaynin qof soo galay khadka ganaaxa, Sanjo si fudud ayuu dhulka isugu lagday waxaan lagu abaal mariyey RIGOORE ciyaartiina waxay noqotay 2-2. Haddaba ciyaarta oo ay shan daqiiqo ka dhiman tahay ayaa kooxdii Cabdisamed ay dhashatay goolkii saddexaad, halkaasna waxaa dhabarka loo saaray Suldan Sanjo 3-2 ay cayaartu ku soo gabagabowday.